Ahoana no Hiresahana Amin’ny Zanaka Momba ny Firaisana? | Fanontaniana
HAMAKY AMIN'NY TENY Afrikaans Albaney Alemà Amharique Anglisy Arabo Arabo (Liban) Armenianina Asamey Azerbaijaney Azerbaijaney (Sirilika) Bashkir Bichlamar Boligara Catalan Cebuano Chavacano Chichewa Chitonga Chitumbuka Cinghalais Danoà Espaniola Estonianina Failandey Fidjianina Fon Frantsay Féroïen Grika Géorgien Hebreo Hiligaynon Holandey Hongroà Iban Ibo Iloko Indonezianina Iokrenianina Islandey Italianina Japoney Kabuverdianu Kachin Kantôney Nentim-paharazana Kikuyu Kiluba Kinyarwanda Kirghiz Kiribati Koreanina Kreôla any Haïti Kreôla any La Réunion Kroaty Kyangonde Lingala Litoanianina Luganda Luxembourgeois Malagasy Malayalam Malezianina Maltais Mandarin Nentim-paharazana Mandarin Notsorina Mongol Mooré Myama Ndau Norvezianina Nyungwe Nzema Oromo Ossète Ourdou Pangasinan Papiamento (Aruba) Papiamento (Curaçao) Persianina Pidgin any Amin'ny Nosy Salomon Poloney Portogey (Brezila) Portogey (Portogaly) Quechua (Bolivia) Quichua (Imbabura) Rarotonga Romanianina Rosianina Samoanina Sepedi Serba (Sirilika) Serba (Soratra Romanina) Sesotho (Lesotho) Setswana Shona Sidama Sinoa (Shanghaï) Sinoa Kantôney Notsorina Sinoa Sichuan Slovaky Slovenianina Soedoà Soundanais Swahili Tagalog Tailandey Tamoul Tatar Tenin’ny Tanana Amerikanina Tenin’ny Tanana Brezilianina Tenin’ny Tanana Espaniola Tenin’ny Tanana Koreanina Tenin’ny Tanana Meksikanina Tenin’ny Tanana Rosianina Tenin’ny Tanana Sinoa Tenin’ny Tanana Venezoelianina Tenin’ny Tanan’ny avy any Arzantina Tenin’ny Tanan’ny avy any Ekoatera Tenin’ny Tanan’ny avy any Philippines Tetun Dili Tigrigna Tiorka Tseky Tsonga Turkmène Télougou Vietnamianina Wichi Xhosa Yorobà Zoloa Éwé
Ahoana no Hiresahana Amin’ny Zanaka Momba ny Firaisana?
Iza no tokony hanazava amin’ny ankizy momba ny firaisana? Milaza ny Baiboly fa andraikitry ny ray aman-dreny izany. Maro tamin’izy ireo no nahita fa tena nanampy azy ireto soso-kevitra ireto:
Aza menamenatra. Tsy miolakolaka ny Baiboly rehefa miresaka momba ny firaisana sy ny taovam-pananahana. Nilaza tamin’ny firenen’Israely koa Andriamanitra fa tokony hampianarina momba izany “ny ankizy madinika.” (Deoteronomia 31:12; Levitikosy 15:2, 16-19) Azonao atao ny mampiasa teny mihaja fa tsy teny mahamenatra mba hiresahana momba ny firaisana sy ny taovam-pananahana.
Ampianaro tsikelikely izy. Aza andrasana hoe efa tanora ny zanakao vao iresahana momba ny firaisana. Dieny mbola kely kosa izy dia iresaho momba izany, ary ampitomboy tsikelikely arakaraka ny taonany ny fanazavanao.—1 Korintianina 13:11.
Ampianaro azy ny fitsipika momba ny fitondran-tena. Mety hianatra momba ny firaisana ny ankizy any am-pianarana. Ampirisihin’ny Baiboly anefa ny ray aman-dreny mba hampianatra ny zanany ny mombamomba ny taovam-pananahana, sy ny tokony ho fiheverana ny firaisana, ary ny hoe iza ihany no mahazo manao firaisana.—Ohabolana 5:1-23.
Henoy ny zanakao. Aza misendaotra na maimaika hitsara ny zanakao, raha manontany momba ny firaisana izy. Aoka kosa ianao “ho mailaka hihaino, tsy ho maika hiteny.”—Jakoba 1:19.
Ahoana no hiarovanao ny zanakao amin’ny mpametaveta?
Ampianaro ny zanakao mba hahay hanohitra raha misy mitady hametaveta izy
Fantaro ny zava-misy. Fantaro ny paikadin’ny mpametaveta ankizy.—Ohabolana 18:15; jereo ny toko 32 ao amin’ny Manontany ny Tanora—Torohevitra Mahasoa, Boky Voalohany.
Araho maso ny fiainan’ny zanakao. Aza “avela hanaram-po” ny zanakao, ary ataovy azo antoka hoe mendri-pitokisana ny olona anankinanao azy.—Ohabolana 29:15.
Ampio izy mba hahay handanjalanja rehefa mankatò. Mila ampianarina hankatò ray aman-dreny ny ankizy. (Kolosianina 3:20) Ho mora amin’ny olona anefa ny hametaveta ny zanakao raha asainao mankatò foana ny olon-dehibe rehetra izy. Afaka miteny amin’ny zanany ny ray aman-dreny hoe: “Aza manaiky raha misy miteny aminao mba hanao zavatra tsy tian’Andriamanitra.”—Asan’ny Apostoly 5:29.
Manaova fanazaran-tena tsotra. Ampianaro ny zanakao hoe inona no tokony hataony raha misy olona mitady hanararaotra azy rehefa tsy eo ianao. Manaova fanazaran-tena fohy mba ho sahy hiteny izy hoe: “Mipetraha tsara! Halazako ianao!”, ary avy eo mandositra haingana. Mila averinao matetika izany satria mora manadino ny ankizy.—Deoteronomia 6:7.
Loha Hevitra Hafa
Toetra & Fomba Fiaina Valin’ireo Fanontaniana Ara-baiboly
Ampianaro Hahay Hitondra Tena Tsara ny Zanakao
Tena mahalala momba ny firaisana ve ny zanakao? Fantaro izay lazain’ny Baiboly sy izay hampianarinao ny zanakao.
Iresaho Momba ny Firaisana ny Zanakao
Zava-dehibe ny hoe ianao no miresaka amin’ny zanakao momba ny firaisana. Jereo ny fomba iresahana an’io zavatra mahasanganehana io.
Hizara Hizara Ahoana no Hiresahana Amin’ny Zanaka Momba ny Firaisana?
ijwbq no. 65
Ampio ny Zanakao Hiatrika ny Fiovana eo Amin’ny Vatany